မင်းသား The Rock နဲ့ ပွဲထွက်လာမယ့် Black Adam ရုပ်ရှင်
By ဟယ်လ်သင် 31 January 2020
ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးမှာရော ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တခုလုံးကို Joker ရုပ်ရှင် ကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့သလို တကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း အလွယ်တကူ လက်ခံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Superman တကိုယ်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ နောက်ထပ် DC ရဲ့ နာမည်ကျော် ဗီလိန်တွေကို ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့ Warner Bro. အတွက်တော့ Joker ဟာ အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Birds of Prey” ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီး သိပ်မကြာခင်မှာတော့ Black Adam ဟာ WB. ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် တစတစ ရောက်ရှိလာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Dwayne Johnson (The Rock) နဲ့ ပွဲထွက်လာမယ့် Black Adam ရုပ်ရှင်ဟာ Joaquin Phoenix ရဲ့ Joker ရုပ်ရှင်ထက် အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း Black Adam ထုတ်လုပ်သူက အတိအလင်း ဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။
Joker ရုပ်ရှင်အတွက် Cinematographer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Lawrence Sher ကပဲ Black Adam ရုပ်ရှင်အတွက် ဆက်လက် တာဝန်ယူထားပြီး မင်းသား The Rock ၊ ဒါရိုက်တာ Jaume Collet-Serra တို့နဲ့ ပူးတွဲဖန်တီးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Sher က ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကို ရောက်ရှိလာရင်တော့ Joker ထက် Black Adam က ပိုပြီး အစဉ်အလာကို ချိုးဖောက်ဖို့ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
DCEU ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေဟာ တကားနဲ့ တကားကြား ခပ်စိပ်စိပ် ထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေပြီး Joker ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ နောက်ထပ် ထွက်ရှိလာမယ့် ရုပ်ရှင်တွေအတွက် လမ်းကြောင်းတခု ဖောက်လုပ်ပေးထားသလို ရှိနေတဲ့အပြင် အားစိုက်ထုတ်မှုနဲ့ ပရိသတ် လက်ခံမှု အပိုင်းကလည်း နောက်ဆံတင်းစရာ မလိုအောင် ပြည့်စုံနေတဲ့ အချိန်ကာလဆိုရင်လည်း မှားနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
WB အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ကျော်လွန်တဲ့ ကန့်ကွက်မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မနေဖို့ကိုသာ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေဘက်က မျှော်လင့်ထားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: Black Adam, Joker ရုပ်ရှင်